Kudzivirirwa bhamba kune Apple Tarisa | Ndinobva mac
Raki rakaipa randaive naro mazuva mashoma apfuura neangu Apple Watch! Mushure memakore anopfuura maviri ndiinaye, ndakaita tsaona diki uye ndakaita chiratidzo nekurova ruoko rwangu netafura. Iyo mhando idiki kwazvo asi sezvo mutumbi weApple Kutarisa uri munzvimbo grey anodized aluminium, pandinotarisa kona yekumusoro yekuruboshwe kwayo ndinoona notch.
Hama dzangu, dzandakaudza nhamo yangu, vanondiudza kuti hazvioneke, hachisi chinhu! Asi isu vedu varikuda vedu "gadget" Apple inotitsamwisa zvishoma kana zvisiri ZVAKAWANDA. Sezvo ini ndichishanda newachi mazuva ese uye ikozvino ndiri kuita zvishoma zvine njodzi zviitiko, ndafunga kutsvaga anodzivirira aruminiyamu, kunyangwe ndikakuudza chokwadi, zvakanyanya kuona kana zvese zvandakuudza zvakavanzika kana kwete.
Ndisati ndatenga dziviriro iyi, ndanga ndichifunga kuti iyo Apple Watch inotova nenguva yayo uye kuti ndinogona kuiisa pakutengesa kana kuipfuudza kune mukoma wangu mudiki kuti agone kunakirwa newadhi yeApple, uye ndichaenderera mberi ndichitenga itsva Apple Watch Series 3, asi dambudziko nderekuti mushure mekuva neimwe mualuminium, ini ndaigara ndichizviudza kuti iyo inotevera Apple Watch ichave iri musimbi Uye sezvo Series 3 muSpain isiri kutengeswa musimbi neLTE, parizvino ndiri kugara neiyi.
Bhamba randakaraira, saka handisati ndaziva kuti rinotaridzika sei uye kuti rakatetepa sei, ndiro randinokuratidza mumifananidzo. Ine gloss nhema nhema uye kubva pane zvandinoona zvinokwana wachi zvakanaka. Mutengo waro wakanyatsogadziriswa uye ndizvo chete 7,01 euros. Ndatenga iro mu next link uye mumazuva mashoma ndichave nayo neni yekuiisa.
Inowanikwa mune akati wandei mavara, saka kana iwe uchida iwe unogona kutarisa uye kana ikabata iwe kana iwe wakambove nemhirizhonga yakafanana neyangu, iyo kubva pane zvandinoona yakajairika, unogona kutenga imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kudzivirirwa bhamba kune Apple Watch